‘मैले बाँच्न पनि कर तिर्नुपर्छ, तर मैले तिरेको करबाट के के किनिरहेको छ कम्युनिष्ट सरकार ?
बिहान ७ः३० बजे काममा हिडछु। म घरमा सुच्छु। यो मेरो श्रमले बनाएको घर हो । मेरो पैसाले किनेको जमिन हो। म यसको कर तिर्छु । मेरो छिमेकीले कोठा भाडामा लगाएका छ्न् । उनी त्यसको पनि कर तिर्छन् ।
लामो समयसम्म सकसको राजनीतिबाट पिडित बेलायती नेतृ टरिजा मेले बुधबारदेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक विदा लिनुभयो । जुन उत्साहका साथ उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो त्यही उत्साह काम गर्ने शिलशिलामा उहाँलाई मिलेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मे ले गरेका काम खासगरी
मन्त्री ज्युहरु समृद्धि विलासी गाडी चढेर आउने हो र ?
पछिल्लो समय देशमा समृद्धिको नारा मजाले घन्किएको छ । सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जनता भने निराश हुँदै गइरहेका छन् ।
जनावर देखि मान्छेसम्म
अफ्रिकाको जङ्गलमा एउटा प्रजातिको बाँदर ‘रामापिथेकस’बाट ‘होमोस्यापिन्स’हुँदै आजको मान्छे भयो भन्छ विज्ञान । १ लाख ५० हजार वर्षको कथा छ । बीचमा एक दुई प्रजातिका ‘अन्य’ मानिस प्रजाति लोप भए भन्ने कुरो पनि आउँछ । झन्डै ४० हजार वर्ष पहिले ‘नेन्दरथल’ प्रजातिको मान्छे लोप भयो रे !
एजेन्सी । नाइजरको राजधानी नियामेमा अघिल्लो साता अर्थात् जुलाई ७ मा सम्पन्न अफ्रिकी युनियनको शिखर बैठकमा अफ्रिकी सरकार एवं राज्य प्रमुखहरुले एउटा ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । करिब १ अर्ब २७ करोड जनसंख्या रहेको अफ्रिकी महादेशका ५५ मध्ये ५४ वटा मुलुकले अफ्रिकी
कृषीका सवालमा केही अनुत्तरित प्रश्नहरु ?
भुमिका नबाँधी भन्नु पर्दा नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यहाँको आर्थिक विकासको सम्भावना पनि कृषि क्षेत्रसँगै जोडिएको छ, यो कुरामा दुई मत छैन । २० औं वर्षअघि धान निर्यात गर्ने मुलुकमा आज अर्बौ मूल्यको प्रमुख खाद्यान्न (चामल, गहुँ र मकै) मात्रै आयात गर्ने मुलुकमा गनिएको छ ।
मन्त्री ज्यू नैतिकता भए राजीनामा दिनुहाेस्
तरकारी विषादी प्रकरण अहिले निकै बहसमा छ । सरकारले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी विषादी प्रकरण अहिले निकै बहसमा छ ।